Olee otú ibudata / ndekọ Spotify music na-ege ntị na iPod / iPod Nano / iPod Shu
Olee otú Download-Record Spotify Music na-ege ntị na iPod-iPod Nano-iPod ịkpọgharịa-anọghị n'ịntanetị
Bụghị onye ọ bụla na-eji ihe iPhone ma ọ bụ onye iPad ma ọ bụ ihe gam akporo ngwaọrụ. Ụfọdụ ndị na-eji Apple iPod nke na-akpan mere maka music ukwuu n'ime. Dị ka ndị ọzọ ngwaọrụ, ọ na-akwado Spotify music gụgharia ọrụ na Spotify ngwa nwere ike ibudata site na iji otu usoro eji na nbudata ọzọ iOS ngwa.
Nanị gaa Apple App Store na gị iPod na ibudata Spotify music ngwa na-enwe music gụgharia ọrụ. Ọ na-nwere a Spotify redio na ya. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na ịhọrọ site na free ma ọ bụ ụgwọ na ndenye aha. The adịchaghị ndenye aha nwere ihe atụmatụ karịa free ndenye aha. N'ihi na a kwa ọnwa ego nke naanị $9.99 ị pụrụ ịnụ ụtọ music si gị iPod na-akparaghị ókè atụmatụ.
Part1.Download-Record Music Site Spotify / gụgharia ka iTunes
Part2. Olee otú mmekọrịta music gị iPod / iPod Nano / iPod ịkpọgharịa
Part3. Nyefee Spotify music ka iPod / iPod Nano
1.Download-Record Music Site Spotify / gụgharia ka iTunes
2.How ka mmekọrịta music gị iPod / iPod Nano / iPod ịkpọgharịa
Mepee iTunes na PC gị na ma ọ bụ Mac.
Jikọọ gị iPod gị na kọmputa.
Pịa na obere nnọchianya nke ngwaọrụ gị n'aka nri akuku nke iTunes.
Pịa na music n'aka-ekpe n'akụkụ nke iTunes. Ego foto n'okpuru.
Tinye akà rà mmekọrịta Music checkbox. Ị nwere ike họrọ music ị chọrọ ka mmekọrịta ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka mmekọrịta dum n'ọbá akwụkwọ site na-ahọpụta "họrọ listi ọkpụkpọ, nka, albums na Genres" na nhọrọ chọrọ na listi ọkpụkpọ ma ọ bụ artists ma ọ bụ albums ma ọ bụ Genres.
Gaa na ala nke gị iTunes na pịa mmekọrịta ka mmekọrịta dum n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ music gị iPod ma ọ bụ iPod Nano ma ọ bụ iPod ịkpọgharịa.
3.Transfer Spotify music ka iPod / iPod Nano na TunesGo
Ụfọdụ ndị ọzọ na atụmatụ nke Wondershare TunesGo:
1. Ị nwere ike nyefee music site na ngwaọrụ gị gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị adịkwa ọ bụla nke gị music. N'agbanyeghị na mgbochi dị na iOS, Wondershare TunesGo-ahapụ gị nyefee music site na ngwaọrụ gị gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Nke a na atụmatụ bụghị nkịtị n'ebe ọ bụla na nke ahụ bụ otu n'ime ihe na-eme ka Wondershare TunesGo pụrụ iche software.
2. Ọrụ nwere ike iji iTunes na Android. Ee, iTunes na android. The Wondershare TunesGo etịbede ihe mgbochi a na-ahapụ gị iji gị android ngwaọrụ iTunes.
3. Ọ-enye gị ohere ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ. Ị nwere ike hazie egwu gị ọbá akwụkwọ site na iji TunesGo ka ihichapụ oyiri faịlụ, dịghịzi adị ma ọ bụ na-efu egwu, wdg Ọ na-agbakwụnye, sị music na mkpado ma album cover gị music na albums.
4. Download si YouTube, Spotify Sound ígwé ojii, na ndị ọzọ na music gụgharia ọrụ / video saịtị. Ịnwere ike ibudata vidiyo si na YouTube, Vimeo, wdg si n'ime TunesGo. I nwekwara ike ibudata music si Sound Ígwé ojii na ndị ọzọ na online music saịtị nri n'ime TunesGo.
5.You ike ibudata vidiyo si na YouTube, Vimeo, wdg si n'ime TunesGo. I nwekwara ike ibudata music si Sound Ígwé ojii na ndị ọzọ na online music saịtị nri n'ime TunesGo. Dịghị mgbe ị na-enwe nchegbu banyere otu music format egwu na ngwaọrụ gị n'ihi na TunesGo software-enye gị ohere iji tọghata ọ bụla music ka a format nke ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị.
6. Back gị music n'ọbá akwụkwọ enweghị ihe ọ bụla hassle. Ị nwekwara ohere ndabere na weghachite gị music n'ọbá akwụkwọ mgbe ọ bụla ị chọrọ.
> Resource> Music> Olee otú Download-Record Spotify Music na-ege ntị na iPod-iPod Nano-iPod ịkpọgharịa O